Tapitra ny fandaharanasa Mahefa : tanjona ny fampivoarana ny tontolon’ny fahasalamana | NewsMada
Tapitra ny fandaharanasa Mahefa : tanjona ny fampivoarana ny tontolon’ny fahasalamana
Mifarana amin’ity taona ity ilay fandaharanasa Malagasy heniky ny fahasalamana (Mahefa) izay vatsin’ny USAID vola. Nanomboka ny taona 2011 ny tetikasa ary hampahafantarina etsy Anosy rahampitso ny asa vita.
Notanterahin’ny JSI Research and training Institute sy ny INC ary niarahana tamin’ny The Manoff Group sy Transaid kosa ity fandaharana ity. Niparitaka tamin’ny faritra enina manerana ny Nosy ny asa natao. Anisan’ny nahazo tombontsoa tamin’izany ny faritra Menabe, Boeny, Melaky, Sava, Sofia ary Diana.
Nitondra rivo-baovao teo amin’ny sehatry ny fahasalamana indrindra tamin’ireo toerana lavitra andriana ny tetikasa. Teo ireo vahaolana nentina tamin’ireo sakantsakana maro tsy ahafahan’ny olona manatona tobim-pahasalamana.
Nisy ihany koa ny fampiofanan natao tamin’ireo mpanentana ara-pahasalamna any ambanivohitra hanatsarana ny fahaiza-manaon’izy ireo. Eo koa ny vahaolana eo amin’ny fitaterana ny marary, ny fanentanana tamin’ny fanaovan maloto ankalamanjana, fampihenana ny tahan’ny zaza maty, fanentanana momba ny fandrindram-piterahana…